Etravirine အမှုန့် (269055-15-4) hplc≥98% ကိုဝယ်ယူ | AASraw R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / Etravirine အမှုန့်
SKU: 269055-15-4. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Etravirine မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (269055-15-4) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Etravirine သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမပွားများရာမှလူ့ immunodeficiency virus ကို (HIV ပိုး) ဆဲလ်များကိုကာကွယ်ထားတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ Etravirine ကအနည်းဆုံး6နှစ်ရှိပြီနေသောလူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက် HIV ပိုးဆက်ဆံဖို့နဲ့အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ HIV ပိုးအတွက်ဝယ်ယူ immunodeficiency syndrome ရောဂါ (အေအိုင်ဒီအက်စ်) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Etravirine HIV ပိုးသို့မဟုတ် AIDS ရောဂါများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းမဟုတ်ပါဘူး။
အမည်: Etravirine အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 262-265 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အသုံးပြုမှုအတွက်ကုန်ကြမ်း Etravirine အမှုန့်
generic အမည်: Etravirine အမှုန့် (pronunciation:, E tra Vir een)
Etravirine အမှုန့်အနည်းဆုံးအသက်6နှစ်ပေါင်းနေသောလူမျိုးလူ့ immunodeficiency virus ကို (HIV ပိုး) ဆက်ဆံဖို့နဲ့အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုတဲ့ဆေးညွှန်းဆေးဖြစ်ပါတယ်။ သည်အခြားဆေးဝါးများအောင်မြင်သောခဲ့ကြပြီမဟုတ်သည့်အခါ Etravirine အမှုန့်ကိုအသုံးပြုသည်။ Etravirine အမှုန့် non-nucleoside ပြောင်းပြန် transcriptase inhibitor (NNRTI) လို့ခေါ်တဲ့ HIV ရောဂါဆေးဝါးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခွဲဝေနှင့်ပြန့်ပွားခြင်းမှ HIV ပိုးရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဤသည်ဆေးဝါးတက်ဘလက်ပုံစံကိုလာများနှင့်များသောအားဖြင့်အစာစားပြီးပြီးနေ့စဉ်နှစ်ကြိမ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ Etravirine အမှုန့်ကိုရေတစ်ခွက်နှင့်အတူတပြင်လုံးကိုမျိုရမည်ဖြစ်သည်။
ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဉျြးဖဉျြး, ထုံ, ဒါမှမဟုတ်လက်သို့မဟုတ်ခြေမနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း, ဝမ်းလျှောပါဝင်သည်။
200 အစာစားပြီးနောက်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်နှုတ် MG
ထက်နည်း6နှစ် 18:
16 တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အစာစားပြီးနောက်နှုတ် mg: 20 100 ကီလိုဂရမ်ထက်လျော့နည်းဖို့ကီလိုဂရမ်
20 တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အစာစားပြီးနောက်နှုတ် mg: 25 125 ကီလိုဂရမ်ထက်လျော့နည်းဖို့ကီလိုဂရမ်
25 တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အစာစားပြီးနောက်နှုတ် mg: 30 150 ကီလိုဂရမ်ထက်လျော့နည်းဖို့ကီလိုဂရမ်
30 ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို: 200 တစ်ရက်အစာစားပြီးနောက်နှစ်ကြိမ်နှုတ် MG
အပျော့စားသို့မဟုတ်အလယ်အလတ် Hepatic ချို့ယွင်း (ကလေး-Pugh Class A သို့မဟုတ် B က): အဘယ်သူမျှမညှိနှိုင်းမှုအကြံပြုခဲ့သည်။
ပြင်းထန် Hepatic ချို့ယွင်း (ကလေး-Pugh Class C): ဒေတာများကိုမရရှိနိုင်
ဘယ်လိုကုန်ကြမ်း Etravirine အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Etravirine အမှုန့်လူ့ immunodeficiency virus ကို (HIV ပိုး) ကဖြစ်ပေါ်စေကာရောဂါကူးစက်ဆက်ဆံဖို့နဲ့အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ HIV ပိုးဝယ်ယူကိုယ်ခံစွမ်းအားချို့တဲ့ရောဂါ (အေအိုင်ဒီအက်စ်) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးပညာများသောအားဖြင့်အတိတ်ကာလက HIV ကုသမှုခံယူကြသူလူနာများကိုအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။
Etravirine အမှုန့်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှုသို့မဟုတ် AIDS ရောဂါကုသသို့မဟုတ်တားဆီးမည်မဟုတ်; သို့သော်သူကမျိုးပွားခြင်းမှ theHIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်နှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏ပျက်စီးခြင်းကိုနှေးကွေးမှပေါ်လာသည်။ ဒါဟာ AIDS ရောဂါသို့မဟုတ် HIV ပိုးရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများအချို့နှောင့်နှေးကူညီလိမ့်မည်။ Etravirine အမှုန့်အခြားလူများထံသို့ HIV ပိုးပျံ့နှံ့ထံမှသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်မဟုတ်။ ဒီဆေးဝါးကိုယူသူတွေကို AIDS ရောဂါသို့မဟုတ် HIV ပိုးရောဂါဆက်စပ်သည်အခြားပြဿနာများရှိသည်ဆက်လက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ပြင်းထန်, အလားအလာအသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း, ဆိုးဝါးအသားအရေတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပါပြီ။ (အသည်းပျက်ကွက်ခြင်းအပါအဝင်အဖု, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များနှင့်တခါတရံ organdysfunction ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ,) Hypersensitivity တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းသတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ အဖုအများဆုံးကုသမှုစတင်များ6ရက်သတ္တပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အသားအရေတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ် hypersensitivity တုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာဖွံ့ဖြိုး အကယ်. Etravirine အမှုန့်ကုထုံးတစ်ကြိမ်မှာရပ်စဲခံရသင့်ပါတယ်, (အသည်း transaminases အပါအဝင်) လက်တွေ့အနေအထားကိုစောင့်ကြည့်ရပါမည်, နှင့်သင့်လျော်သောကုသမှုကိုစတင်ရပါမည်။ ပြင်းထန်သောအဖုစတင်ခြင်းအောက်ပါ Etravirine အမှုန့်ပျစဲအတွက်နှောင့်နှေးနေတဲ့အသက်အန္တရာယ်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Etravirine အမှုန့်အလားအလာပြောင်းလဲ plasma levelsof အတွက်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများရရှိလာတဲ့အများအပြားမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူသို့မဟုတ် Etravirine အမှုန့်များ၏အပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ လူနာ nonprescription ဆေးဝါးများနှင့်အာဟာရ / ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြည့်စွက်အပါအဝင်သူတို့ယူနေကြအားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဆေးဝါးများ, အစီရင်ခံရန်အကြံပြုထားရမည်, အထူးသဖြင့်စိန့်ဂျွန်ရဲ့ wort ။
ကိုယ်ခံစွမ်းအားပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း syndrome ရောဂါပေါင်းစပ် antiretroviral ကုထုံးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ကုထုံးတုံ့ပြန်လူနာ indolent သို့မဟုတ်ကျန်နေတဲ့အခွင့်အရေးယူရောဂါကူးစက်မှုတစ်ခုရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
nonnucleoside ပြောင်းပြန် transcriptase inhibitors (NNRTI) ကြား HIV Cross-ခုခံဘို့အလားအလာတည်ရှိပေမယ့်အပြည့်အဝစူးစမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ အခြားအ NNRTIs မှ cross-ခုခံပျက်ကွက်အထီးကျန်သည့် virologic တစ်ခု Etravirine အမှုန့်ပါဝင်သော regimen နှင့်အတူ virologic ပျက်ကွက်အောက်ပါခန့်မှန်းထားသည်။ တစ်ဦးလူနာရဲ့ဆေး regimen များအတွက် antiretroviral အေးဂျင့်များ၏ရွေးချယ်ရေးဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
အခြားအတက်ကြွ antiretroviral အေးဂျင့်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြု likelihoodof ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုကိုတိုးမြှင့်စေမည်။ တစ်ဦး NNRTI ပါဝင်သော regimen အပေါ် virologic ပျက်ကွက်ကြုံတွေ့ကြသူလူနာများကိုသာ nucleoside နှင့်အတူပေါင်းစပ် Etravirine အမှုန့်ကိုအသုံးမပြုသင့် / transcriptase inhibitors reverse nucleotide ။
အထူးအာရုံစူးစိုက်မှုသတင်းအချက်အလက်များ dispensing, တိကျထိုးရွေးချယ်မှု, ဆေးအလို့ငှာ၏ကူးယူအားပေးပြီးမှ, ထိုအန္တရာယ် ofmedication အမှားများကိုလျှော့ချရန်ညွှန်ကြားချက်ဟောဒီမှာ, overdosing နှင့် underdosing ရပါမည်။
Etravirine ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း Etravirine အမှုန့်စျေးကွက်
ကုန်ကြမ်း Etravirine အမှုန့်မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား
သင်တစ်ဦးမတည့်တုံ့ပြန်မှု၏ဤနိမိတ်လက္ခဏာမဆိုရှိပါကအရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီကိုရယူပါ: အသင်းအဖွဲ့ချုပ်; အခက်အခဲအသက်ရှူခြင်း; သင်၏မျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်း, နှုတ်ခမ်း, လျှာ, သို့မဟုတ်လည်ချောင်း။
ရှားပါးကိစ္စများတွင် Etravirine အမှုန့်ကျောက်ကပ်ပျက်ကွက်မှဦးဆောင်အရိုးကြွက်သားတစ်သျှူးများ၏ပျက်ပြားမှုတစ်ခုအခွအေနေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သငျသညျ unexplained ကြွက်သားနာကျင်မှု, နူးညံ့ကြင်နာမှု, ဒါမှမဟုတ်အားနည်းခြင်းရှိပါကသင်သည်လည်းအဖျား, ပုံမှန်မဟုတ်သောမောပန်းခြင်းနှင့်မှောင်မိုက်အရောင်ဆီးပြီအထူးသဖြင့်ရှိလျှင်ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။
အဖျား, ချမ်းတုန်, ကြွက်သားအားနည်းခြင်း, ပူးတွဲသို့မဟုတ်ကြွက်သားနာကျင်မှု, ပါးစပ်အနာစိမ်း, အလွန်ပင်ပန်း feeling, ဒါမှမဟုတ်အသစ်ကကူးစက်မှုကိုအခြားနိမိတ်လက္ခဏာများ;
ရင်ဘတ်နာကျင်မှု, အသက်ရှူတို feeling;
လျင်မြန်သောနှလုံးခုန်နှုန်း, တိုးမြှင့်ချွေး, တုန်တုန်ယင်ယင်, အိပ်စက်ခြင်းပြဿနာများ (အိပ်မပျော်), စိုးရိမျသို့မဟုတ်စိတ်တို feeling;
ပြင်းထန်သောဝမ်းလျှော, unexplained ကိုယ်အလေးချိန်, ရာသီအပြောင်းအလဲခွန်အားမရှိခြင်း, လိင်အတွက်အကျိုးစီးပွားအရှုံး;
ပျို့, အထက်အစာအိမ်နာကျင်ခြင်း, အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံး, မှောင်မိုက်ဆီး, ရွှံ့-အရောင်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့, အသားဝါ (အရေပြားသို့မဟုတ်မျက်စိအဝါရောင်);
ပြင်းထန်သောအသားအရေတုံ့ပြန်မှု - အဖျား, လည်ချောင်းနာ, သင့်မျက်နှာသို့မဟုတ်လျှာ၌ရောင်ရမ်းခြင်း, သင့်မျက်မှောက်၌လည်းမီးလောင်, အရေပြားနာကျင်မှုကို, (အထူးသဖြင့်မျက်နှာသို့မဟုတ်အထက်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်) န့်နှင့်အကြောင်းတရားများကျဲကျဲနဲ့ကွာတဲ့အနီရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်အသားအရေအဖုအားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
သင်၏လက်သို့မဟုတ်ခြေမထုံသို့မဟုတ် tingly ခံစားမှု;
စိတ်ဆိုးအစာအိမ်, ချုပ်, ရင်ပူခြောက်သွေ့ပါးစပ်;
ခန္ဓာကိုယ် (အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့လက်နက်အတွက်, ခြေထောက်, မျက်နှာ, လည်ပင်း, ရင်သားများနှင့်ခါး) အဆီများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်အပြောင်းအလဲများကို။ "
AASraw ထံမှ Etravirine အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Etravirine ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း
Arnica Montana အမှုန့်